Talata, Desambra 14, 2021 Talata, Desambra 14, 2021 Douglas Karr
Sellfy dia vahaolana eCommerce mora ampiasaina ho an'ny mpamorona mitady hivarotra vokatra nomerika sy ara-batana ary koa famandrihana sy fanontana amin'ny fangatahana - avy amin'ny fivarotana iray avokoa. Na eBook, mozika, horonan-tsary, fampianarana, entana, haingon-trano, sary, na karazana orinasa hafa. Atombohy mora - Mamorona fivarotana amin'ny tsindry roa. Misoratra anarana, ampio ny vokatrao, amboary ny fivarotanao ary velona ianao. Mitombo lehibe - Mampiasà endri-barotra namboarina mba hampitomboana ny varotrao sy ny orinasanao.
Miara-miasa amin'ireo mpivarotra mailaka marobe aho, gaga foana aho noho ny tsy fisian'ny fampielezan-kevitra mailaka namboarina mialoha sy namboarina tao anatin'ny kaonty taorian'ny fampiharana. Raha sehatra mamaky an'ity ianao - dia tokony ho vonona handeha ao amin'ny rafitry ny rafitrao ireo fanentanana ireo. Raha mpivarotra mailaka ianao, dia tokony hiasa hampiditra karazana mailaka maro karazana araka izay tratry ny herinao mba hampitomboana ny firotsahana, ny fahazoana, ny fitazonana ary ny fampiakarana avo lenta. Ireo mpivarotra izay tsy mampiasa dia voatarika